«Ary nony tonga ny Andro Pentekosta, dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra.» Asa. 2:1
Natao ho antsika toy ny tamin'ireo mpianatra atao ho antsika toy ny voalohany ihany ny Fanahy. Hanome ny hery avy any ambony ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy Andriamanitra, tahaka ny nanomezany izany ho an'ireo nandre ny hafa-pamonjena tamin'ny andro Pentekôsta. Amin'izao ora izao indrindra ny Fanahiny sy ny fahasoavany dia natao ho an'izay rehetra mila izany sy handray Azy amin'ny teniny.
Mariho fa rehefa tonga tamin'ny firaisana tanteraka ihany ny mpianatra ary rehefa tsy niady izay hanana ny toerana ambony indrindra intsony, izay vao nirotsaka ny Fanahy. Niray saina izy rehetra. Niala avokoa ny tsy fiombonan-kevitra rehetra. Nitovy avokoa ny fanambaràna nomen'ny Fanahy azy. Mariho ny voalaza: "Ary niray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino" -Asa 4:32. Ny Fanahin’Ilay maty mba hahavelona ny mpanota no nanetsika ny fiangonan'ny mpino iray manontolo.
Tsy ho azy ireo ihany ny fitahiana nangatahin'ny mpianatra. Nitambesatra teo aminy ny vesatry ny fanahy maro mila famonjena. Natao hotorina hatrany amin'ny faran'ny tany mantsy ny filazantsara ka notakin'izy ireo ny hanafian'i Kristy azy ny hery efa nampanantenainy. Tamin'izany no nirotsahan'ny Fanahy Masina ka nahatonga fiovam-po teo amin'ny olona an'arivony maro tao anatin'ny iray andro monja.
Izany koa no mety hitranga amin'izao andro izao. Aoka ny Kristianina hanaisotra ny fisaratsarahana rehetra ka hanolotra ny tenany ho an'Andriamanitra ho famonjem-panahy. Aoka izy ireo hangataka amim-pinoana ilay fitahiana efa nampanantenainy fa ho tonga tokoa izany. Ny filatsahan'ny Fanahy tamin'ny andron'ny apôstôly no "loha-orana" ary dia be voninahitra tokoa ny vokatra. Mbola ho betsaka noho izany anefa ny fara orana. Inona no teny fikasana ho an'izay velona amin'ireo andro farany ireo? "Miverena ho amin'ny fiarovana mafy, hianareo mpifatotra manana ny fanantenana! Anio no hanambarako hoe: Hanonitra roa heny ho anao Aho" - Zak. 9:12 "Mangataha ranonorana amin'i Jehovah hianareo amin'ny andro fara-orana, dia amin'i Jehovah, Izay manao ny helatra; ranonorana mivatravatra no homeny azy, eny, samy homeny ny zava-maitso any an-tsaha ireny" - Zak. 10:1.